Equatorial Guinea Oo Lagu Ganaaxay Mashaqadii Malabo
HomeAfricaEquatorial Guinea Oo Lagu Ganaaxay Mashaqadii Malabo
Equatorial Guinea ayaa la saaray ganaax lacageed oo dhan US$100,000 (boqol kun oo dollar ) kadib mashaqadii ka dhacay ciyaartii semi finalka koobka Afrika ee xulkaasi guuldarada kala kulmay qaranka Ghana Habeenkii Khamiistii.
Xidhiidhka kubada cagta qaarada Afrika wuxuu sidoo kale sheegay in kooxda wadanku ay ku ciyaari doonaan garoon cidlo ah oo taageerayaasha laga xayiray haddii ay mar dambe rabshadahii oo kale dhacaan.
Taas oo micneheedu yahay in taageerayaasha xulka Equatorial Guinea loo ogol yahay oo ay ka soo xaadiri doonaan ciyaarta hirdanka kaalinta saddexaad ee ay Sabtida la ciyaarayaan xulka DR Congo.
Equatorial Guinea waxaa sidoo kale lagu xukumay inay bixiyaan kharashka daweynta ee ku baxaya 36 qof oo waxyeelo ka soo gaadhay dhibaatadii Khamiistii.
Caf waxay ku tidhi warsaxaafadeed ay maalintii Jimcaha soo saareen sidan “14 taageere ayaa loo gudbiyey cusbitaalka baadhitaanona lagu samaynayaa. iyadoo qof kamid ah dadkaas dhaawaciisa si gaar ah loo qiimaynayo sidii uu ku yimidna loo kuur gallayo”.
Ciyaartii ka dhacday garoonka Malabo Stadium, oo ay gallalafeen rabshado ay taageerayaashu abuureen, ayaa bilaabatay markii ciyaartu maraysay 82 daqiiqo, wakhtigaas oo taageerayaasha xulka Ghana lagu soo ururiyey goob yar oo goolka ka dambeysa iyagoo ay sida roobka ugu soo dhacayeen quraarado iyo dhagaxaan ay soo tuurayeen taageerayaasha wadankooda loogu martida ahaa.
Police-ka ayaa isku dayayay inay amaanka soo celiyaan, iyagoo isticmaalaya budhadhka rabadhka ah iyo sunta dadka ka ilmaysiisa, waxaanay soo kiciyeen diyaaradaha rabshadaha la dagaalama ee qumaatiga u kaca (helicopter) kuwaas oo garoonka dushiisa gaaf wareegayay.
Kadib dib u dhac qaatay 30 daqiiqo in ka badan ciyaarta ayaa dib loo bilaabay iyadoo socotay 3 daqiiqo oo dambe sidaasna guushu ku raacday xulka Ghana 3-0.
Caf waxay intaas ku dartay inay baadhitaan ku wadaan warbixinihii ay soo gudbiyeen garsoorku, laguna ciqaabi doono mar kale xulka Equatorial Guinea “Kacdoonada iyo mushkilada dhaqanka u noqotay taageerayaashooda”.
Guddida xidhiidhku waxay hoosta ka xariiqeen inaanay dhacdadani ahayn tii ugu horeysay ee taageerayaasha xulka Equatorial Guinea sameeyaan balse intii tartanku socday ay dhawr xaalad khal khal ah abuureen- waxaa jiray ayay yidhaahdeen falal xun xun oo ay ku kaceen ciyaarihii hore ee ay xulkoodu la kala ciyaarayeen Gabon iyo Tunisia.
Laakiin waxay yidhaahdeen: “Si loo dhiiri galliyo ciyaar wanaaga iyo saaxiibtinimada inta uu socdo tartanka qaramada qaarada Afrika ee 2015, Gudigu waxay go’aan sadeen in dib loo dhigo ciyaarta bilaa taageerayaasha ay ku ciyaari doonaan, iyadoo laga dhigayo taageerayaasha kuwo aan wax dambi ah si ay uga qayb qaataan ciyaarta loogu tartamayo kaalinta saddexaad .”
Dhinaca kale, ciyaaryahanka difaaca xulka DR Congo ee Gabriel Zakuani ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in ciyaarta kaalinta saddexaad lagu ciyaaro garoon banaan.
“Haddii ay ciyaaryahanada ku soo tuuraan waxan oo kale [dhagaxaan iyo quraarado], Eq Guinea, kaalinta saddexaad ha iska gallaan, Waan jecelahay kubada cagta laakiin naftayda ayaa igala qiimo badan,”ayuu Zakuani, oo 28 jir ahi ku soo qoray bartiisa Twitter ka.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, isla garoonka qaadkiisu yahay 15,250 ka ee Malabo Stadium ayay ka dhici doontaa ciyaarta hirdanka kaalinta saddexaadna.
Goals and Highlights: Tottenham 1-4 Man City
Xulka Morocco Oo Laga Saaray Ka Qayb Galka Koobka Afrika Ee 2015-ka Kadib Diidmadii Marti Galinta